Request Burmese in Australia
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Sunday, August 01, 2010
အဖြူဖင်ကိုရက်နေသော ဒီမိုငတုံးများနှင့် အဖြူဖင်ကိုရက်ခွင့်ရရန် ကြိုးပန်းနေသည့် ကလိမ်ကကျစ် နအဖလူများ မတို့ထိရဲသည့် သတင်းများ
☀ Top2Google Searches on “Food: The Ultimate Secret Exposed”
☀ Food: The Ultimate Secret Exposed Addendum – Chemical BPA Linked to Medical Problems
☀ Food: The Ultimate Secret Exposed
☀ Oxford Professor Calls for Mass Drugging Population Through Water Supply
☀ Big Food Inc. will do everything to stop you talking about this
☀ The green lobby: is it killing the planet?
★ မိမိအားကိုးဖြင့် နအဖကို မဖြုတ်ချပဲ အဖြူကို ပထွေးတော်လိုသည့် နည်းကို သုံးလိုလျှင် ဒီဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ပါ။
★ စကားလုံးလှလှမသုံးပဲ တိုင်းပြည်ကို ရိုးသားစွာ ချစ်လိုပါက ဒီမှာ ဖတ်ပါ။
★ မြန်မာဆိုတာ မင်းမမေ့နဲ့။
အဖြူဖင်ကိုရက်နေသော ဒီမိုငတုံးများနှင့် အဖြူဖင်ကိုရက်ခွင့်ရရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် ကလိမ်ကကျစ် နအဖလူများ မတို့မထိရဲသည့် အကြောင်းအရာများ
☀ Media Whores Promote Eugenics! Let’s Start Killing Grannies!
☀ Greece will beawar zone, Sect of Revolutionaries warns tourists
☀ "Let Them Eat Cake": A handful of oligarchs are becoming billionaires while the rest of the country goes down the drain
☀ Foreclosures Continue To Dramatically Increase In 2010
☀ Stealthy Government Contractor Monitors U.S. Internet Providers, Worked With Wikileaks Informant
★ မိမိအားကိုးဖြင့် နအဖကို မဖြုတ်ချပဲ အဖြူကို ပထွေးတော်သည့် နည်းကို သုံးလိုလျှင် ဒီဗီဒီယိုတွေကို ကြည့်ပါ။
မင်းကကော, ဘာလုပ်နေလဲဟေ့...ကျွန်မျိုးဟေ့..ဒို့မြန်မာ..။ မင်းအမေကို, မွတ်စလင်ကုလားက ဘာလုပ်လို့ သူတို့ကိုမုန်းနေတာလဲဟေ့...။
ငါ့မေကို ကုလားက ဘာမှမလုပ်ဘူး။ အာရပ်တွေက မင်းတို့အမေကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီး သူရဲ့ မဲမဲတူးတူး စအိုပေါက်ကြီးကို တဗုံးဗုံးနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်း သမိုင်းမှတ်တမ်းရှိပါတယ်။ မင်းတို့တွေ ဆန္ဒရှိလို့မဟုတ်ပဲ ချီးထွက်တဲ့ စအိုပေါက်ကို မုဒိမ်းကျင့်ခံပြီးမှ မွတ်ဆလင်အတင်း လုပ်ခံခဲ့ရတဲ့အကြောင်း လူတိုင်းသိပါတယ်။ ငါတို့မြန်မာ့မြေက မြင့်မြတ်တယ်။ မြင့်မြတ်တဲ့ မြန်မာ့မြေမှာ စအိုပေါက်မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ၀ါဒဖြန်တဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ မရှိသင့်ဘူး။ မင်းလဲ.. ငါပြောတာ သဘောတူတယ် မဟုတ်လား? ငါမေးတာကို ဖြေစမ်း ကျွန်ကုလား။ စကာမစပ်.. မင်းက မြန်မာကို ကျွန်လို့ပြောတာ ဒီဘလော့ပိုင်ရှင်က နာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီကောင်က ဗမာကို ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းပြီးဆဲနေတဲ့ ဒီမိုငတုံးဆိုတော့ နာဖို့နေနေသာသာ ပျော်တောင်ပျော်မှာပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဖြူလီးအတုလေးကို သူ့ကိုပေးလိုက်ပါ။ အဲဒီကောင်က ကောင်းကောင်းကြီးစုတ်ပြလိမ့်မယ်။ ဟဲဟဲ ….အဲဒီငနာကြီးဘလော့မှာ မင်းတို့ ကျွန်ကုလားကို နှိပ်ကွပ်ရတာ တကယ်အရသာရှိတယ်။
ဗမာကိုသာဆဲရဲ စော်ကားရဲသည့် ဒီမိုငတုံးကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့
ကုလားလဲ အသည်းနဲ့ပါကွယ်။ မင်းတို့ကောင်တွေ ညံ့လို့ခံရတာပဲ။ ငါတို့က စီးပွားရေးပဲလုပ်တာကို မင်းတို့မနာလိုဘူး မဟုတ်လား။ ဒီမှာ Mr ဇော်မျိုး..မင်းညီမ မွတ်စလင်ဖြစ်သွားချင်လား...။ ဗလီတက်ချင်လား။ လုပ်ချင်ရင်ပြော...ငါကူညီပေးမယ်...။